70 နှစ်ပျက်ကွက်ပြီးနောက်ငါချွေးမချိုးဘဲ hardmode ကိုရက် ၇၀ လုပ်ခဲ့ပုံ။ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
ငါဘယ်လိုကျရှုံးခြင်း၏ 70 နှစ်ကြာတဲ့ချွေးကိုချိုးဖောက်ခြင်းမရှိဘဲ, hardmode အပေါ်7ရက်ပေါင်းကိုပြု၏။
TL; ဒေါက်တာကျွန်မနောက်ဆုံးတော့ပျက်ကွက်၏7နှစ်ကြာ PMO စွဲကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာအချိန်ကယ့်ကိုလွယ်ကူပါတယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ့အဘို့အလုပ်လုပ်ခဲ့သောဖြေရှင်းချက်တစ်သုည-arousal မူဝါဒကအတူပြီးပြည့်စုံသောအတှေးထိန်းချုပ်မှုခဲ့, ငါနှစ်ဦးကိုအဆင့်ဆင့်ကိုကျော်ပါကပြဋ္ဌာန်း။ ငါ့ကိုတစ်စုံတစ်ရာမေးကြည့်ပါ။
ယောက်ျားတွေနှင့်မိန်းကလေးများဟေ့။ ငါတပြင်လုံးကိုလုပ်ငန်းစဉ်၏တစ်ဦးပြည့်စုံစေ့စပ် (6000 စကားလုံးများကိုကျော်) အကောင့်တိကျမ်းစာ၌လာသည်နှင့်အပေါ်မှာ posted င့် wordpressဒါကြောင့် reddit တစ်ခုသို့မဟုတ်ဖိုရမ်များအတွက်ရှည်လျားလွန်းသောကြောင့်။ သို့သော်လည်းငါသည်ဤအရပ်၌တစ်ခုအတိုကောက်ဗားရှင်းပေးပါလိမ့်မယ်။ သင်ပိုမိုအသေးစိတ်ချင်လျှင်, ထို link ကိုကူးခေါင်း။ ငါသည်အခြားသောသူတို့အားအချို့အတွေးအခေါ်များသို့မဟုတ်အားပေးမှုရရှိနိုင်မည်ဖြစ်အံ့သောငှါမျှော်လင့်ချက်အတွက်ဒီစာရေးတာပါ။ ငါ NoFap Reddit တို့ကအားပေးအားမြှောက်ခဲ့တာကိုငါသိ၏။ သင်တို့ရှိသမျှကိုကျေးဇူးတင်ဒီတော့! ငါနောက်လအတွက်ပြောင်းလဲနေတဲ့ဘာမှမမြင်နိုင်, ငါသေး 90 ရက်ပေါင်းမှာမဟုတ်ဘူးကတည်းကဒီနည်းနည်းအချိန်မတန်မီဖြစ်စေခြင်းငှါ, သိပေမယ့်အမှုအရာနေ့ 20 ကတည်းကဒါမှန်မှန်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိခဲ့ပါပြီ။ တစ်စုံတစ်ဦးကနောက်ကျတာထက်အကြိုးခံစားနိုင်ဖြစ်အံ့သောငှါဒါကိုယ့်အစား, နောက်ကျတာထက်ဒီပစ္စည်းပစ္စယများကိုမျှဝေချင်ပါတယ်။
ကျွန်မအကြောင်းကို 32 နှစ်ပေါင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်, porn နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအရှုံးမပေးဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ကြရဲ့သူတစ်ဦး 7yo ခရစ်ယာန်အထီးပေါ့။ ငါအများအားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ဖို့, တိုင်းနှစ်ရက်နေ့စဉ် fapping သို့မဟုတ်တစ်ခုသာအလယ်အလတ်အသုံးပြုသူကြီးနှင့်အချို့သောရက်သတ္တပတ်ငါအများကြီးပိုအသုံးပြုနိုင်မယ်လို့ပေမယ့်သာ, တစ်ပါတ်တစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ် porn ကိုသုံးနိုင်သည်။ ငါရပ်တန့်နိုင်ဘူးဆိုတော့စွဲခဲ့တာကိုငါသိ၏။ ငါကြိုးစားခဲ့အခါ, ငါများသောအားဖြင့်ရက်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်တစ်ပါတ်အကြာတွင်ပြန်သွားကြသည်လိမ့်မယ်။ ငါတစ်လပြုပေမယ့်တကယ်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်ပြီးတာနဲ့။
ဤအချိန်ငါနေဆဲခြင်းဖြင့်အံ့သြနေပါတယ်သောကယ့်ကိုလွယ်ကူပါတယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါနဲ့ဘာကြောင့်ရှင်းပြဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ 70 + ကာလ၏လက်ရှိ Streak မီ, ငါမှ, ဒါပေမယ့်တစ်ခုသာယေဘုယျအမျိုးသမီးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုလိုခဲ့အခါတိုင်းငါ masturbating ခဲ့သည်ဘယ်မှာလစုံတွဲတစ်တွဲကိုပြု၏။ အဘယ်သူမျှမအဲဒီအချိန်တုန်းကငါ porn, သို့မဟုတ်အခြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်စောင့်ကြည့်သို့မဟုတ်ငါသိတယ်သို့မဟုတ်မြင်ဘူးမိန်းကလေးတွေစဉ်းစားအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဖြစ်တယ်။ လပေါင်းများစွာဒီစုံတွဲကိုပုံမှန်ဖြန့်ချိနှင့်အတူထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာငါ့အရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရမ္မက်ကိုစောင့်ရှောက်နေချိန်မှာငါ့ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ ဒါဟာဖြစ်နိုင် porn နှင့်စိတ်ကူးယဉ်နှင့်အတူအော်ဂဇင်ပေါင်းသင်းသောဦးနှောက်ကိုဝါယာကြိုးတွေအများကြီးကို reset နှင့်ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်စိတ်ကူးယဉ်ဖို့ငါ့အစွဲကိုချိုးဖောက်ဆီသို့ဦးတည်နေတဲ့ရှည်လျားသောလမ်းသို့သွားကြ၏။ ငါကနဲ့တူခံစားခဲ့ရအခါတိုင်းငါ FAP နိုင်ကတည်းကဒါဟာအစ, တပြင်လုံးကိုအရာ non-ပြဿနာအနည်းငယ်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သူကတောင်ခဏအကြာတွင်ပျင်းစရာဖြစ်လာခဲ့သည်နှင့်မကြာခဏကျနော့်ကိုပုံမှန် FAP နှင့်အတူနှောင့်အယှက်မဖြစ်နိုင်ဘူး။
သို့ဖြစ်. ငါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်စီမံခန့်ခွဲခဲ့လျှင်ကြည့်ရှုရန်, fapping မပါဘဲ 10 ရက်ပေါင်းလုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါက ... ဖြစ်တယ်။ အစဉ်အမြဲ ထိုအချိန်မှစ. ကျွန်မဆယ်ရက်အပြီးဆယ်ရက်ဖြည့်စွက်ခဲ့ကြရတယ်, ငါ 70 ကျော်ယခုမိပါတယ်။ ငါကပိုပြီးထက်တစ်လသွားကြဖို့မဖြစ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းထင်ဖို့အသုံးပြု, ငါအချိန်အားဖြင့်သွား၏အဖြစ်ကြောင့်ခက်ခဲများနှင့်ခက်ခဲတယ်ထင်ဖို့အသုံးပြုပေမယ့်ယခုငါမှန်မဟုတ်ဘူးငါသိ၏။
ဒါနဲ့နှစ်ခုအဆင့်အရာအထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့တာထင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဖြစ်ကောင်း သာ. အရေးကြီးသောခဲ့ကြသည်အချို့အခြားအမှုအရာတို့ကိုခဲ့ကြသည်:
ကြောင်း arousal နှင့် horniness သဘောပေါက်သင့်ဦးနှောက်ဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေး, ပုံသို့မဟုတ် cue မှာကျိန်းဝပ်သောအခါအဖြန့်ချိလျက်ရှိသောသင့်သွေးစီးအတွက်ဟော်မုန်း / နဲ့အတူ Endorphins, ့ထုတ်ကုန်ဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျလိင်၏စိတ်ကူးတစ်ခုသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်ပေါ်နေသောစောင့်ရှောက်လျှင်ဒါ, သင် horny ဖြစ်ခြင်းကိုရပ်တန့်ဘယ်တော့မှဦးမည်ကို၎င်း, horniness တိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။ သငျသညျအခြားအရာတစ်ခုခုမှသငျ့စိတျကိုဖွင့်လျှင်မူကား, ထိုဟော်မုန်း (အဲဒီမှာ၌ရှိ၏ဘယ်လောက်ပေါ် မူတည်. ) အချိန်တိုအတွင်းသဘာဝကျကျသင့် system ထဲကနေဖယ်ထုတ်ခြင်းခံရပါလိမ့်မယ်။ ငါကျပန်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဟော်မုန်း၏တိုတောင်းတဲ့ပေါကျကှဲထံမှ 20 မိနစ်လုံးဝရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိနိုင်ပါသည်။ အစဉ်အမြဲငါလိုအပ်တော့ပါဆုံးနေ့ချင်းညချင်းဖြစ်ပါတယ်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနေ abstinence သဘောပေါက်သင့်ရဲ့လိင် drive ကိုတဖြည်းဖြည်းသုတ်ရည်လွှတ်ပြီးနောက်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှတိုးပွါးသောကွောငျ့, ခက်ခဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်စေပါဘူး။ ကောင်းမွန်သောသတင်းကြောင့်အစဉ်အမြဲတိုးမြှင့်မထားဘူးဆိုတာပါပဲ။ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ပြီးနောက်, သငျသညျခဲယဉ်း mode ကိုပေါ်မှာဆိုရင်, သင်၏လိင် drive ကိုအများဆုံးမှာပိုပြီးသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသောကွောငျ့ကြှနျတေျာ့အတှေ့အကွုံ၌ထိုအရပ်မှမဆိုခက်ရပါဘူး။ သငျသညျတဖြည်းဖြည်းတိုးလာလိင် drive ကိုကိုင်တွယ်မှာပိုကောင်း get ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကယ်တော့, အမှုအရာ, ပိုမိုလွယ်ကူရယူပါ။
တစ်သုည-arousal မူဝါဒကချမှတ်။ ငါ arousal တည်းဟူသောအလွန်ကနဦးပေါကျကှဲခံစားရတိုင်းကျွန်မ arousal ဟော်မုန်းများ၏ထပ်မံလွှတ်ပေးရန်ကာကွယ်တားဆီးဖို့, ကဖြစ်ပေါ်သမျှအတွေးထဲကအကိုပိတျထား။ ထိုအခါဟော်မုန်းများသောအားဖြင့်တစ်နာရီထက်လျော့နည်းအတွက်နိမ်။ ထိုကဲ့သို့သောပြည်နယ်အတွက်, ဦးနှောက်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချအစိတ်အပိုင်းများကိုအလေးအနက်ထားအာရုံချို့ယွင်းကြောင့်ငါကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကြီးထွား arousal တစ်ပြည်နယ်သို့ရသွားပါစေပါဘူးနှင့် relapse အများကြီးပိုဖွယ်ရှိသည်။ ဤသူသည်ငါ sex အကြောင်းစဉ်းစားကြဘူးဆိုလိုသည်။ အစဉ်အဆက်။ သငျသညျအခွအေနေ၏မျိုးကိုလက်ခံနိုင်လျှင်, nofap သင်ထင်ထက်အများကြီးပိုလွယ်ဖြစ်နိုင်! ငါ arousal ရှာဖွေတွေ့ရှိကပိတ်ဆို့ဘယ်လိုအကြောင်းအသေးစိတ်အတွက်, အချိန်ကိုကြည့် wordpress post ကိုပုဒ်မ B, 1-4 ။
တစ်ဂျာနယ် Keeping ။ ညစဉ်ညတိုင်းငါခေတ္တမျှသောနေ့ရက်သည် သွား. ဘယ်လောက်ချရေးမယ်လို့, ငါ့သွေးကြောထဲသို့ဟော်မုန်းများလွှတ်ပေးရန်စေဆိုကျပန်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေးသို့မဟုတ်ပုံရိပ်တွေရှိခဲ့ခြင်းရှိမရှိ။ ငါကသူတို့ကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပုံကိုရေးချလိုခြင်းနှင့်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးထို arousal သွားခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါဂျာနယ်နှင့် ပတ်သက်. အကောင်းဆုံးအရာကကိုယ့် FAP အခမဲ့နှင့်ခံစားမှုဒဏ်ငွေကြီးအချိန်အများစုသည်ငါ့အားပြတာပါပဲ။ ငါ arousal ၏အမူအရာတို့သည်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းအတွက်ရယ်များနှင့်ရုန်းကန်နေရတဲ့အခါ, သူကဘဝကိုပဲစိတ်ဆင်းရဲဖြစ်ပြီး, ငါအမှုအရာပိုကောင်းစေ FAP ဖို့လိုအပ်ကြောင်းစဉ်းစားရန်လွယ်ကူသည်။ အဲဒီမှာဂျာနယ်ရှိခြင်း, ငါသည်အဖတ်နဲ့ကျွန်မအချိန်ဒဏ်ငွေ 90% feeling နှင့်အတိတ်ကာလ၌ရှိလူအပေါင်းတို့သည်ရုန်းကန်မှုများ fapping မရှိဘဲကျော်လွှားခဲ့ခဲ့ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။ ဤသည်မျှော်လင့်ချက်နှင့်ရှုထောင့်ကိုပေးတော်မူ၏။
ကျွန်မအစအဦးမှာပါဟုပြောသည်အဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပိုမိုအသေးစိတ်ငါ၏အ blog post တစ်ခုတွင်လည်းမရှိ, ဒီမှာဒါကြောင့်သင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင်အဲဒီမှာကြည့်သွားပါ။
ကသာငါ့အဘို့အလုပ်လုပ်ပစ္စည်းပစ္စယဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါငါ့အတှေ့အကွုံမြားကျော်ပြန် Reading ကအများကြီး, လိုက်တယ်နှင့် idiosyncratic ၏ကြင်နာကြည့်ရှုသည်။ သို့သော်လည်းငါသည်တစ်စုံတစ်ဦးကိုအကြှနျုပျအဘို့အလုပ်လုပ်ခဲ့သောအရာတို့ကိုအချို့ထံမှအချို့အတွေးအခေါ်များရနှင့်ဖြစ်ကောင်းသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အခွအေနနဲ့ခရီးမှသူတို့ကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နိုင်ဖြစ်အံ့သောငှါမျှော်လင့်ပါတယ်။ သင်တို့ရှိသမျှသည်မှာမဆိုမေးခွန်းများရှိပါကမေးကြဘူးပါ။ ငါသည်အခြားတစ်စုံတစ်ဦးကယနေ့ငါဖြစ်၏ဘယ်မှာရကိုကူညီသမျှငါတတ်နိုင်သမျှလုပ်ဖို့ဝမ်းသာပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်မအစအဦးမှာပါဟုပြောသည်ကဲ့သို့ပင်, ငါနေဆဲငါနောက်ဆုံးတော့ဤအမှုကိုလုပ်ကြံနှင့်ဤအချိန်ဒီတော့လွယ်ကူသောခဲ့ကွောငျးအလွန်အံ့အားသင့်မိပါတယ်။ ငါသည်လည်းဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုငါ smug သို့မဟုတ်ဂုဏ်ယူအဖြစ်ကိုဖြတ်ပြီးလာမမျှော်လင့်ပါတယ်။ ခုနစ်နှစ်အဘို့ငါသည်ငါ့အားလျော့ Self-ထိန်းချုပ်မှုကိုကျင့်သုံးခြင်းနှင့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ရန်နှင့်ဘုရားသခင်အားကတိတော်များကိုအောင်နေဖြင့်မည်သည့်သိသာထင်ရှားသောဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်စေမအောင်မြင်။ ကျွန်မရှင်းရှင်းလင်းလင်းဂုဏ်ယူဖြစ်ရန်မအကြောင်းပြချက်ရှိသည်!
ခိုင်မာတဲ့ fapstronauts နှင့် AMA နေဖို့!